The Ab Presents Nepal » Breaking News- रवि लामिछाने तत्कालै छुट्ने सम्भावना कम ! भोलि म्याद थपिन सक्छ !
Breaking News- रवि लामिछाने तत्कालै छुट्ने सम्भावना कम ! भोलि म्याद थपिन सक्छ !
चितवन -: अधिवक्ता गोपिलाल देवकोटाले न्यायीक हिरासतमा रहेका सञ्चारकर्मि रवि लामिछाने तत्कालै छुट्ने सम्भावना कम रहेको बताएका छन् । आईतबार भरतपुरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै देवकोटाले अनुसन्धानका पाटाहरु अझ धेरै रहेकाले रवि तत्कालै छुट्ने सम्भावना कम रहेको बताएका हुन् ।
माउन्टेन टेलिभिजनका पत्रकार सालिकराम पुडासैनि मृत्यु प्रकरणमा नाम मुछिएपछि उनीहरु काठमाडांैबाट पक्राउ परेका हुन् । गत साउन २० गते पुडासैनि चितवनको भरतपुर महानगरपालिका १ नारायणढस्थित पोखरा बसपार्कमा रहेको होटल कंगारुमा झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए ;।